Chii chinonzi Brand Advocacy? Unozvikudziridza Sei? | Martech Zone
Chii chinonzi Brand Advocacy? Unozvikudziridza Sei?
China, Kurume 9, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Sezvo ini ndichitarisa kumashure kumakore gumi apfuura evatengi vedu vamiririri, vatengi vazhinji vauya uye vaenda avo vatakasangana navo tisingazive kuburikidza nekushambadzira kwedu kwakawanda. Nekudaro, hwaro hwebhizinesi redu rave kushambadzira kweshoko-remuromo kubva kune avo vatengi isu takagadzira mhedzisiro kweanopfuura makore. Muchokwadi, zvitatu zvezvifungo zvatiri kushanda parizvino zvine chekuita zvakananga nevatengi vekare vatakashanda navo.
Hazvishamise kuti vatsigiri vezviratidzo vane 50% yakawanda simba muchisarudzo chekutenga kupfuura zvakajairwa mutengi uye 90% yevatengi vanotaura kuti kurudziro yezwi-remuromo (WOM) inotungamira iko kwesarudzo yekutenga kwavo. Muchokwadi, mu20 kusvika 50% yesarudzo dzese dzekutenga, Izwi-reMuromo ndiro rinotungamira
Advocacy inotyaira madhora zviuru zvitanhatu zvemadhora ekushandisa evatengi
Chii chinonzi Brand Advocacy?
Mukushambadzira, a mumiriri wezita munhu, mushandi, mushandirwi, kana mutengi anotaura zvakanaka nezvechiratidzo kana chigadzirwa, zvichizoguma neyakajeka meseji-yemuromo (WOM) meseji nezve iyo mhando kune yavo network.
Chii chinonzi Mutengi Kutsigira?
Kukurudzira kushambadzira kwechiratidzo, zvigadzirwa zviri kutora tsika iri mutengi-centric, ichipa hukuru hwevatengi ruzivo. Mhedzisiro ye kukurudzira vatengi hakusi kungo wedzera kwekuchengetwa kana avhareji yevatengi-kukosha, inoburitsa kudzoka kune investment sevaya vatengi vanova brand vatsigiri.
Iko kusarudzika, hongu, ndekwekuti pane hombe gweta rekutsigira apo mabhizinesi asiri kuita basa rakanaka rekutsvaga kana kukumbira rubatsiro rwevanogona kuve vatsigiri vemakambani. Vanopfuura hafu yemakambani ese havatozive kuti vamiririri vavo ndevapi. JitBit yaisa pamwechete iyi infographic, 15 Zvikonzero Nei Brand Advocacy iri Musimboti webhizinesi rako, iyo inogovera ese ekupinda-uye-kunze kwekushambadzira kwechiratidzo uye kugadzira yako wega zvirongwa zvevatengi zvekukurudzira.
Nzira dzekukudziridza Brand Kuzivisa
Tarisa pane hukama - chii chinoita kuti mutengi awire murudo nechiratidzo chako? Chigadzirwa chemhando yepamusoro, basa rakanakisa revatengi, uye chiitiko chinowirirana.
Shumira nekukurumidza - kana uchitenga pamhepo, 71% yevashanyi vanotarisira rubatsiro mukati memaminitsi mashanu. Ipa rubatsiro kana vatengi vako vachirida.
Goverana kubudirira - wedzera mhinduro yakanaka uye kubudirira kwevamiriri vazvino - ficha wongororo mumashambadziro, govera mhedzisiro mune zvidzidzo, uye gara uchitaura nezvevatengi vako.
Makomborero vatengi - ipa sneak peeks mune zvitsva zvigadzirwa / masevhisi, gamuchira yakasarudzika kukoka-chete zviitiko, tumira zvakasarudzika zvinopihwa, gadzira chirongwa chekuvimbika, uye upe VIP sevhisi
Kushamisika vatengi - shamisa vatengi vakavimbika pavanenge vasingatombozvitarisira, uye vachataura nezve kushamisika, uye mutumwa wayo. Izvo zvinogona kuve chero chinhu kubva yekutenda manotsi kune emahara kukwidziridzwa.
Ipa simba vanotsigira - vanotsigira vanoda kurumbidza kwavo kwavanofarira mhando. Nzira yakanakisa yekurumbidza yavanogona kupa ndeyekutumira. Kupa kunopa kukurudzira kwekutumira bhizinesi idzva nzira yako.
Rangarira zviitiko zvakakosha - kutumira vatengi kadhi kana chipo pazuva rakakosha senge Kisimusi kana zuva ravo rekuzvarwa inzira yakapusa yekusimbisa hukama hwavo neako marashi.
Kumbira uye ita pamhinduro - bvunza vatengi mhinduro, uye chiite pazviri. Vatengi vanova vatsigiri kana vachinzwa senge mhinduro yavo yanzwikwa uye zvavari kukoshesa zvinokosheswa.
Iti ndatenda, kunyangwe nevanozvidza - ziva uye utende mhinduro dzese, kunyangwe zvakaipa. Kana vatengi vasingafare vachinzwa kukosheswa, vanoomerera kwakatenderedza kwenguva yakareba.
Uye usakanganwa kutarisa Jitbit! Tsitsi yavo yekubatsira tikiti yakafa yakapusa, ine simba rinoshamisa uye inotora masekondi kuimisa.
Tags: kukurudzirabrand brand kukurudziramumiriri wezitakuvaka kukurudzirakukurudzira vatengijitbit